‘पोर्न कथा होइन, समस्या लेखेको हुँ’ - कला - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
‘पोर्न कथा होइन, समस्या लेखेको हुँ’
नेपालखबर काठमाडौँ २३ बैशाख
‘इन्द्रमायाको देश’ र त्रिशंकुशको देश’ कथासंग्रह र ‘भिड हराएको मान्छे’ कविता संग्रहका जन्मदाता साहित्यकार एलबी क्षेत्रीको पछिल्लो कथासंग्रह ‘व्रतभङ्ग’ बजारमा आएको छ। प्राय: आफ्ना रचनामा प्रेम, यौन र मनोविज्ञानलाई मिहीन ढंगले केलाउन रुचाउने एलबीको पछिल्लो कृति पनि यौन मनोविज्ञानमै केन्द्रित छ। उनको ‘व्रतभङ्ग’ कथासंग्रहमा केन्द्रित रहेर नेपालखबरले ५ प्रश्न गरेको छः
१. ‘व्रतभङ्ग’ कस्तो विषयवस्तमा आधारित कृति हो ?
यो कथासंग्रह हो र यसमा २६ वटा कथा छन्। कथाहरूको संग्रह भएकाले यसमा विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर लेखिएका कथा छन्। समग्रमा हेर्ने हो भने यसमा धेरैजसो कथाहरू मानव सम्बन्धबारे छन्। कतिले मेरा कथाहरूलाई यौन कथा पनि भने वा भन्लान् तर यी यौन कथा होइनन्, मानव सम्बन्धका कथा हुन भन्ने मेरो तर्क छ। जसमा यौन प्रसंगले पनि ठाउँ पाएको छ।
२. पुस्तकमा मानिसको मनोवैज्ञानिक र यौनिक पक्षलाई कसरी चिरफार गरिएको छ?
मानव सम्बन्धको कुरा गर्दा यौनको महत्व के त? भन्ने प्रश्नमा आधारित प्लट बुनिएका छन् केही कथामा। खास गरेर पति–पत्नीबीचको सम्बन्धबारे मैले केही जटिल विषय उठाएको छु। जस्तै मानव जीवनमा यौनको महत्वपूर्ण भूमिका छ तर पतिले पत्नीसँग प्रेम–यौन स्थापित गर्ने वा बलात्कार–यौन स्थापित गर्ने? भन्ने प्रश्नमा म केन्द्रित छु।
३. पुस्तकको आवरण चित्र स्त्रीको रहेको छ। यसको संकेत वा अर्थ गहन होलाजस्तो देखिन्छ। पृष्ठभूमि भन्न मिल्छ?
चित्र आवरण संरचना अध्ययनभित्र पर्छ। धेरैले शीर्षक बोलिरहेको वा सुहाउँदो चित्र चयन गर्नु हुन्छ र मैले पनि गरें। कथालाई गम्भीरताका साथ पढेर चित्र हेर्ने हो भने अर्थ निस्कन्छ। चित्रमा महिलाको आकृति हरियो धर्काले करिएको अनुहार र रातो रंगको मिश्रण छ। यसको विशेष माने छ । पाठकले पत्ता लगाउनुहोला भन्ने विश्वास छ मलाई।
४. तपाईं रसिक मान्छे। त्यो रस पुस्तकमा कत्तिको पोख्नुभएको छ?
मेरो उद्देश्य रसिक भएर रस पोख्नुभन्दा पनि पति–पत्नी सम्बन्धबीचको मौलिक समस्याको उठान गर्नमा केन्द्रित छ। यसभित्र समावेश कथामध्ये ’व्रतभंग’, ‘मेरो निर्णय’, ’प्रारम्भ’, ‘प्रेम वासना होइन’ आदि कथा उत्कृष्ट बहसका विषय बन्ने छन्जस्तो मलाई लाग्छ। यी कथाहरूमा महिला पात्रको नै प्रभुत्व छ र यी पात्रको माध्यमबाट नै मैले भिन्न–भिन्न एंगलबाट हाम्रो समाज, महिला चरित्र र पुरुष वर्गको अहम्बारे कुरा गरेको छु।
५. लेखनमा उमेरले कत्तिको फरक पार्छ? बुढेसकालमा पनि यौनबारे लेख्दै छ भन्नेहरु पनि छन् कि?
बुढेसकालबारे त म अझै विश्वस्त छैन किनकि म एक्टिभ भएरै ऊर्जासहित काम गरिरहेको छु। तर उमेरको अनुभवसँगै मैले पोर्ने कथा लेखेको छैन। मैले समस्या लेखेको छु। यहाँ आएर कुरो न बुझेर वा न बुझ्नेले अलिक बढी आलोचना गर्न सक्छन् तर अहिलेसम्म त मैले तेस्तो पाएको छैन। पाएमा जवाफ दिने छु।
वास्तवमा उमेरले लेखनमा ऊर्जा, समय र निर्भिकता दिन्छ। उमेरले लेखनमा केही फरक पर्दैन । म त स्वतन्त्र छु। मेरो जिम्मेवारी नै लेख्नु हो जस्तो लाग्छ।
प्रकाशित २३ बैशाख २०७६, सोमबार | 2019-05-06 18:21:08